Cuna qabateeyn la saaray keenya – Biyacade
Cuna qabateeyn la saaray keenya
Dowlada soomaaliya ayaa xayirtay qaadkii ka soo dagi jiray garoomada soomaaliya.
Xayiraadda ay soo rogtay dowladda soomaaliya ayaa salka ku heeysa arima la xiriira fara galin qaranimo oo ay keenya ka wado gudaha soomaaliya.
Safiirka soomaaliya u fadhiya dalka kenya ayaa ka dhawaajiyay asbaabahabloo xayiray in ay tahay arimo siyaasadeed.
gudoomiya gobalka qaadka ka baxo ayaa mar sii horeeysay tagay hargeeysa asagoo doonayo in ay suuq ka hirgaliyo gudaha hargeeysa kaasoo lagu iibiyo qaadka.
Wuxuuna intaa sii raaciyay in uu aqoonsi uga raadin doono dowlada kenya hadii ay hishiis la galaan.
dowlada soomaaliya oo arinkaasi ka carootay ayaa xayirtay dhamaan howlihii qaadka soomaaliya lagu keeni jiray waxeeyna xayiraadaasi ka dhaqan gashay dhamaan gudaha soomaaliya
Previous Xalab oo sun loo adeegsaday
Next Hiiraan miyeey ka maaranta jowhar